သာသနာဆိုသည်မှာ အဆုံးအမ ဖြစ်ပေ၏။ အဆုံးအမ ဆိုသည်မှာ သီလ-သမာဓိ-ပညာ ဆိုသော အဆုံးအမ ဖြစ်ပေသည်။ ထိုအဆုံးအမကို လက်ခံရရှိထားသောသူအဖို့ ယခုမျက်မှောက်ရော နောင်သံသရာပါ အကျိုးကျေးဇူး ကြီးမားလှပါပေသည်။ သင်ယူသင့်သော အဆုံးအမများကို သင်ယူနိုင်သော စာအုပ်များမှ ကြည့်ရှုပြီး သင်ယူကာ ဖတ်ရှုသူ သင်တို့၏ ဘဝတစ်ခုလုံး ဘုရား၏ အဆုံးအမ၌ တည်နိုင်ကြပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အနတ္တကဗျာ - ဒဂုန်ဦးထွန်းမြင့်
ဆရာဒဂုန်ဦးထွန်းမြင့်မှ ရေးသားသီကုံးထားသော ၁၃၂၄-ခု၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း(၁၄-၁၅)နေ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော ရႀမ်း ပြည်နယ်ဦးစီးအဖွဲ.ဌာနပေါင်းစုံတို.၏ဆဌမအကြိမ် ကထိနဒါနအဖြစ်ထုတ်ဝေသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၃၀.၀)ကီလိုဗိုက်၊ (130.0)KB Pdf file application.
၁၉၈၄ ခု၊ ဇူလိုင်လထုတ် ဉာဏ်လင်းဓမ္မစာပဒေသာ စာစောင် (စာမျက်နှာ ၁၈၀ မှ ၁၉၀ ထိ) တွင် ဖော်ပြပါရှိတဲ့ ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင် ရေးသားတဲ့ "နောက်တိုး ပါဠိတော် ဝတ္ထုငါးပုဒ်" ဆောင်းပါးကို ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစား ၃၂၁ ကီလိုဗိုက် (321.0 kB) - ဖိုင်အမျိုးအစား ပီဒီအက်ဖ် (application/pdf) Read More…
မေတ္တပါရဂူကျမ်း - စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးအရှေ့ပရက္ကမဆရာတော်
မန္တလေးမြို့ လႀခင်အင်ဆန်းစာပုံနှိပ်တိုက် ဓာတ်နန်းရပ်မႀ ၁၉၇၀-ခု တွင် ထုတ်ဝေပါ သည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၃၀.၀)ကီလိုဗိုက်၊ (230.0)KB Pdf file application.
သီလရှင်ကျင့်၀တ်နှင့်ညွှန်ကြားလွှာအမှတ်(၈၄) - သာသနာရေးဦးစီးဌာန
၁၉၉၄-ခု၊ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေသော သီလရႀင်များအတွက် လိုက်နာရ မည့်စည်းကမ်းများကို ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ သီလရႀင်၀တ်ရာတွင် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် မပြုကျင့်ရန်များကို အသေးစိတ်ရႀင်းလင်းတင်ပြထားပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၃၄၁)ကီလိုဗိုက်၊ (341)KB pdf file applicatiion.
ပတောက်ချောင် မဟာကထိန်တော်ကြီးရာဇ၀င်နှင့်ကုန်းဘောင်မင်းဆက် ကထိန်အာနိသင်ငါးပါး
၁၃၁၃-ခု၊ တော်သလင်းလတွင် မႎၩလေးမြို့ ရဲမဟာပုံနှိပ်တိုက်သစ်၌ ထုတ်ဝေသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၅၂.၇)ကီလိုဗိုက်၊ (52.7)KB pdf file application.
ကျွန်းကြီးလေးရပ် အချိန်သတ်မှတ်ချက် - မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
၁၉၈၀-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထုတ် ဗုဒ္ဓဓမ္မလောကမဂ္ဂဇင်း ငွေရတုအထူးထုတ်
၌လာရှိသော မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးရေးသားသော အာရှ ဥရောပတိုက်တို့
ကီလိုဗိုက်။ (133)KB pdf file application.
သီဟိုဠ်မှ မိလိန္ဒဋီကာကျမ်း - အရှင်ကေလာသ
၁၉၈၆-ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ် အနှစ်(၃၀)မြောက် ဗုဒ္ဓဓမ္မလောကမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော
ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၈၀.၇)ကီလိုဗိုက်။ (80.7)KB pdf file application.
နိဿယကျမ်းပြုအကျော်​နေရင်းဆရာတော် - အရှင်သုမင်္ဂလ(စစ်ကိုင်း)
၂၀၁၀-ခုနှစ်၊ မတ်လထုတ် အပ္ပမာဒမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော နေရင်းဆရာတော်အ
ကြောင်းနှင့်ဆရာတော်ပြုစုခဲ့သော စာပေများအကြောင်းကို ရေးသားတင်ပြ
ထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၅၅.၅)ကီလိုဗိုက်။(55.5)KB pdf file application.
နှုတ်ခမ်းမွှေးဆရာတော် - အောင်ချစ်စိုး(လသာ)
၂၀၀၃-ခုနှစ်၊ ဧပြီလထုတ် အပ္ပမာဒမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော လယ်တီ​ဆရာတော် လက်ထက် မြတ်စွာဘုရားကို နှုတ်ခမ်းမွှေးတပ်သော ဆရာတော်တစ်ပါး၏အ
ကြောင်းကို ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား
(၇၁.၆)ကီလိုဗိုက်၊ (71.6)KB pdf file application.
၀သုန္ဓရေ ဆံရေညှစ်သလော - ဓမ္မာစရိယဦးအေးနိုင်(ဘီ-အေ)
၁၉၈၃-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လထုတ် စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ထေရဝါဒစစ်တမ်း
ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၁၇၂)ကီလိုဗိုက်။ (172)KB pdf file application.
ဇာတ်တော်(၅၅၀)မှ ပျောက်နေသော ဇာတ်များနှင့်စာရင်းမ၀င်သောဇာတ်များ - ဓမ္မာစရိယဦးဌေးလှိုင်
ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၂၀)ကီလိုဗိုက်။ (220)KB pdf file application.
ဘုရားမပွင့်မီက ပရိတ်တော် - ဓမ္မာစရိယဦးဌေးလှိုင်
ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၀၃)ကီလိုဗိုက်။ (203)KB pdf file application.
သမထကျမ်း - ဦးဖေအောင် M.A.,M.S(ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ညွှန်ကြားရေး၀န်)
ဦးဖေအောင် မဟာဝိဇ္ဖာဘွဲ့ယူစဉ်အခါက စာတမ်းတင်​သွင်းသော သမထကျမ်း
စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းအင်္ဂလိပ်ကျမ်းကို ဦးထင်အောင်မှ မြန်မာဘာသာသို့
ပြန်ဆိုရေးသားထားပါသည်။ ၁၉၅၇-ခုနှစ်၌ ရန်ကုန်မြို့ မေပုံနှိပ်တိုက်တွင် ရိုက်
နှိပ်ထုတ်ဝေပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂၃၅)ကီလိုဗိုက်။ (235)KB pdf file application.
ဂုဏ်တော်(၉)ပါးပုတီးစိပ်နည်းနှင့်ရောင်ခြည်တော်ဘွဲ့ဘုရားရှိခိုး - မုံရွေးဇေတ၀န်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
မန္တလေးမြို့ တိုင်းလုံးမိတ်ဆွေပုံနှိပ်တိုက်တွင် ရိုက်နှိပ်သော မုံရွေးဇေတ၀န်ဆရာ
တော်ဘုရားကြီး ရေးသားပြုစုတော်မူခဲ့သော ဂုဏ်တော်ကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်ပါ
သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဇာတ်လမ်းများနှင့်တကွ ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ပုံနှိပ်သည့်ခုနှစ်ကိုမူ မသိရပါ။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၇၃.၂)ကီလိုဗိုက်။ (73.2)KB pdf file application.
စာအုပ်အရွယ်အစား(၂၆၂)ကီလိုဗိုက်။ (262)KB pdf file application.
ကျောက်မဲမြို့ ရှမ်းကျောင်းကြီးဦးဝိမလကိစ္စ ဝေဘန်ချက် ဝိနိစ္ဆယကျမ်း - ဦးကျော်(သီပေါ)
၂၇-၁၀-၁၉၅၀-ခုနှစ်၊ မန္တလေးမြို့ ပိဋကတ်တော်ပြန့်ပွားရေးပုံနှိပ်တိုက်တွင် ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေသော စော်ဘွားလက်ထက်တော်က ဝိနိစ္ဆယကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁၀၈)ကီလိုဗိုက်။ (108)KB pdf file application.
ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်တိုင်း သိသင့်၊ သိအပ်၊ မှတ်သားသင့် မှတ်သားထိုက်သည့်ဗုဒ္ဓ၀င်ကျမ်းများ - မင်းမွန်
၂၀၀၇-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် သူရဇ္ဖမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ဗုဒ္ဓ၀င်ကျမ်းများအကြောင်းကို
စုစည်းတင်ပြထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၆၁.၇)ကီလိုဗိုက်။ (61.7)KB pdf file application.
ဗုဒ္ဓ၏နိဗ္ဗာန်နှင့်မရှိသဘောဖွင့်ဆိုချက် - ဘုန်းခြိမ့်
၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ ဇွန်လထုတ် အနော်မာမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ထေရဝါဒကျမ်းဂန်လာနိဗ္ဗာန် အကြောင်းကို ဖွင့်ဆိုချက် ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၉၂.၈)ကီလိုဗိုက်။ (92.8)KB pdf file application
ပိဋကတ်ကျမ်းစာ ကျောက်ထက်မှာ - သူရဇော်
၁၉၈၁-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလထုတ် စစ်ပြန်မဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော မန္တလေးတောင်ခြေအနီးရှိ မင်းတုန်းမင်းကြီးလက်ထက် မန္တလေးမြို့အရှေ့ဘက်ရှိ စကျင်ကျောက်တောင်ကြီးမှ
သလင်းကျောက်တုံးများကို ယူ၍ တညီတည်းဖြတ်တောက်စေကာ ၄င်းကျောက်ပြား ပေါ်တွင် ဘုရားဟောပိဋကတ်​(၃)ပုံကို ထိုးထွင်းစေခဲ့သည်။ ယခုအခါ၌ ကမ္ဘာပေါ်တွင်
ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစာအုပ်အဖြစ်ထင်ရှားသော အဓိကရနေရာကြီး ဖြစ်ပေသည်။ ထိုအ ကြောင်းအရာများကို ဆောင်းပါးအဖြစ်ရေးသားထားသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၁၉) ကီလိုဗိုက်။ (219)KB pdf file application.
ပရိတ်ကြီး - တင်အောင်သွင်
၁၉၈၄-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလထုတ် ဗုဒ္ဓဓမ္မလောကမဂ္ဂဇင်း(၂၉)နှစ်ပြည့်အထူးထုတ်မှ ပရိတ် ကြီးအကြောင်းကို ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၄၅၂)
ကီလိုဗိုက်။ (452)KB pdf file application.
ဟိမ၀န္တာချီးမွမ်းခန်း - ဦးသော်ဇင်
၁၉၈၁-ခုနှစ်၊ မေလထုတ် မြ၀တီမဂ္ဂဇင်း၌လာရှိသော ပိဋကတ်လာ ဟိမလယ ခေါ် ဟိမ၀န္တာအကြောင်းကို သုတေသနပြုရေးသားထားသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား(၂၁၃)။ (213)KB pdf file application.
ကျေးဇူးတော်ရှင် သက်တော်​ရှည် ရွှေဥမင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏နှုတ်တော်မြွက်ကြားဩဝါဒစကားများ
၂၆-၁၁-၂၀၀၂-ခုနှစ်၌ ထုတ်ဝေသော ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဆုံးမစကားများကို တစ်စု တစ်စည်းတည်း စာအုပ်အဖြစ်ရိုက်နှိပ်ထားပါသည်၊ စာအုပ်အရွယ်အစား(၂၁၇)ကီလိုဗိုက် (217)KB pdf file application.
လောင်းရိပ်အောက်က ထွက်ခဲ့ပါ - တိက္ခ(ထေရဝါဒီ)
ဓမ္မရံသီမဂ္ဂဇင်းအမှတ်စဉ်(၂၃၂-၂၃၃)၊ ၂၀၀၉-ခုနှစ်၊ ဧပြီလနှင့်မေလတွင်လာရှိသော ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးကျော်ဟိန်း၏တရားများကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်တင်ပြ လမ်းမှန်သို့ ရောက်အောင် တည့်မတ်ပေးသော ဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်အရွယ်အစား (၂၈၁) ကီ လိုဗိုက်။ (281)KB pdf file application.
The Questions Of King Milinda, Volume I+II - Translated by U Pu
This book isafamous one that including in Tipitaka of Theravadism. If you are interesting in debate concerning idealism with phenomenon and other religions'affairs. All the answers are in this book. This book is combined with two volume and has 924 pages. File size (4.29)MB pdf file. ဤစာအုပ်သည် ပိဋကသုံးပုံတွင် ပါ၀င်သော မိလိန္ဒပဉှာကျမ်းစာအုပ်ကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိလိန္ဒမင်းကြီး မေးခွန်းထုတ်ထားသော ခဲရာခဲဆစ် မေးခွန်းများကို ရဟန္တာအရှင်နာဂသေနမှ ကျိုးကြောင်းသာဓကများစွာနှင့် စိတ်၀င်စား ဖွယ်ရာ ပြန်လည်​ဖြေဆိုထားပုံ နှစ်သက်ဖွယ် အတုယူဖွယ် ပညာရဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာအယူဝါဒရေးရာများကို လေ့လာလိုလျှင်လည်းကောင်း၊ ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းလိုလျှင် လည်းကောင်း၊ ဤစာအုပ်ကို ဖတ်မှတ်လေ့လာသင့်သည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြံပေး လိုပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၄.၂၉)မီဂါဗိုက်။ Read More…
ပဗ္ဗဇ္ဇဥပသမ္ပဒကမ္မ ဝိသောဓနီစာတမ်း - သီပေါမြို့ရွှေဓါးဆရာတော်ဘုရားကြီး
၂၀-၃-၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် သီပေါမြို့ ကျားပုံနှိပ်တိုက်တွင် ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၃၀၉) ကီလိုဗိုက်။ File size (309)KB pdf file application. Uploaded by 4.7.2012.
ဝါဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သက်တော်(၉၅)နှစ်အား အထိမ်းအမှတ်ပြု၍ ၁၃၇၄ ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့်ကျော် (၅)ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေသော စာအုပ်ငယ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၄၄၉)ကီလိုဗိုက်။ File size (449)KB pdf file application. Uploaded by 10.7.2012.
ဤကျမ်းစာအုပ်ငယ်သည် ၁၃၀၂ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ လူထုပုံနှိပ်တိုက်မှ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ဘူးသည်။ ယခု ရွှေကျင်စာပေထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှနေပြီး ရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီး၏အဖြစ်တော်စဉ်အကျဉ်းချုပ်နှင့်တွဲဖက်၍ ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်သောသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၆၉၆)ကီလိုဗိုက်။ File size (696)KB pdf file application. Uploaded by 10.7.2012.
ဣန္ဒြိယောဝါဒကထာ - ပဌမရွှေကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
ဤစာအုပ်သည် ရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးမှ အမေရိကန်လူမျိုး ပါဠိဆရာမစ္စတာဂျိမ်းစ်ဂရေးထံသို့ရေးသားပေး ပို့​သောစာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ဤစာအုပ်ကို ရန်ကုန်မြို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒသာသနာပြု တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသမှ ၁၃၇၂-ခုနှစ် နတ်တော်လတွင် ပြင်ဆင် တည်းဖြတ်၍ လှူဒါန်းသည်။ ဤဣန္ဒြိယောဝါဒကထာစာတမ်းတွင် ပါဠုပါသက၀ဏ္ဏ၀ဏ္ဏနာနှင့်ဒိဌိဇုကမ္မ ကထာ ဟူ၍ အပိုင်း ၂-ပိုင်း ပါ၀င်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၅၂၃)ကီလိုဗိုက်။ File size (523)KB pdf file application. Uploaded by 12.7.2012.
သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၏အဓိပတိ ဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ဉာဏိဿရ၏စာအုပ်များ ဆောင်းပါးများကို စုဆောင်းတင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Read More…
အဘိဓမ္မာကျမ်းပါ ဟဒယ၀တ္ထုပြဿနာ - ဒေါက်တာမောင်(က​မ္ဘောဇ)​အပ္ပမာဒဓမ္မရသမဂ္ဂဇင်း ၂၀၀၅-ခုနှစ်၊ မေ-ဇွန်-ဇွန်လိုင်လတို့၌ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးအဖြစ် ရေးသားထားသော အဘိဓမ္မာနှင့်သက်ဆိုင်သောဓမ္မရေးရာပြဿနာများ ဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်
အစား(၄၃၁)ကီလိုဗိုက်။ File size (431)KB pdf file application. Uploaded by 22.8.2012.
သက္ကတဘာသာမှ ပါဠိ-မြန်မာ ပြန်ဆိုအပ်သော စာဏကျနီတိပါဠိ-မြန်မာ - ရွှေဟင်္သာတိုက်သစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
၁၃၇၃-ခုနှစ်တွင် (၁၈)ကြိမ်မြောက်ကျင်းပသော ဗုဒ္ဓသာသနာလုံးဆိုင်ရာ ရွှေကျင်နိကာယ သံဃာ့အစည်းအဝေးပွဲကြီး ကျင်းပခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဓမ္မဒါနပြုသော ကျမ်းစာအုပ်
ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၁.၃၉)မီဂါဗိုက်။ File size (1.39)MB pdf file application. Uploaded by 23.8.2012.
ပထမရွှေကျင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သိဿကောဝါဒ စကားပုံနှင့်ဩဝါဒကထာများ - ရွှေဟင်္သာတိုက်သစ်ဆရာတော်ကြီး
၃၁-၁-၂၀၁၂ နေ့မှ ၂-၂-၂၀၁၂ နေ့ထိ ကျင်းပသော(၁၈)ကြိမ်မြောက်ဗုဒ္ဓသာသနာလုံးဆိုင်ရာ ကျင်းပခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဓမ္မဒါနပြုသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် အရင် တစ်ခါ တင်ထားပေးသော စာအုပ်နှင့်နာမည်တူပြီး ဆုံးမစာပါတူပါသည်။ သို့သော် သမိုင်း အကျဉ်းချုပ်များကို ဤစာအုပ်ထဲတွင် အပိုဆောင်းပြီး ထည့်သွင်းထုတ်ဝေထားပါ သည်။ ဗဟုသုတရဖွယ်ရာ အကြောင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၀.၉၉) မီဂါဗိုက်။ File size (0.99)MB pdf file application. Uploaded by 26.8.2012.
ဇာတ်တော်ငါးရာ့ငါးဆယ်လေ့လာချက် - မောင်အောင်ထွတ်
၁၉၇၄-ခုနှစ် ဧပြီ-မေ လထုတ် ရတနာမွန်ဓမ္မမဂ္ဂဇင်း၌ ပါသော ဆောင်းပါးကို ပြန်လည်၍ စာစီရိုက်ထားပါသည်။ အရွယ်အစား(၁၀၀)ကီလိုဗိုက်။ File size (100)KB pdf file application. Uploaded by 28.8.2012.
ကိုယ့်ဟာနဲ့သာ ကိုယ်နေပါ - ယောဆရာတော်
၂၀၁၀-ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ယောဆရာတော် သင်္ကန်းသက်ရွှေရတုအထိမ်းအမှတ်နှင့်ထေရ ဝါဒဓမ္မဝိသောဓနီသိမ်ကျောင်းတော်သီမာသမ္မုတိမင်္ဂလာနှင့်ကျောင်းလွှတ်ပူဇော်ပွဲအတွက် ထုတ်ဝေသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၇၄၆)ကီလိုဗိုက်။ File size (746)KB pdf file application. Uploaded by 30.8.2012.
ပေါင်းတာမှန်မှ ကောင်းတာရ - ယောဆရာတော်
ယောဆရာတော်၏သင်္ကန်းသက်နှစ်(၅၀)ပြည့်ရွှေရတုအထိမ်းအမှတ်နှင့်ရွှေကျင်နိကာယနှစ် (၁၅၀)ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အထူးလက်ဆောင်အဖြစ် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေသော
စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၅၉၆)ကီလိုဗိုက်။ File size (596)KB pdf file application. Uploaded by 4.9.2012.
ဒေါသကို ဘယ်လိုပယ်မလဲ - ရဝေနွယ်(အင်းမ)
၂၀၀၉-ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ထုတ်ဝေသော လက်ကမ်းစာအုပ်ငယ်လေး ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ် အရွယ်အစား(၆၅၉)ကီလိုဗိုက်။ File size (659)KB pdf file application. Uploaded by 4.9.201.
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ရေးသားဟောကြားဆိုဆုံးမခဲ့သော တရားတော်များကို တစ်စုတစည်းတည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်၊
မေတ္တာ သူငယ်ချင်း - ရဝေနွယ်(အင်းမ)
၂၀၀၆-ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ပထမအကြိမ်အဖြစ် ဂျာနယ်များ တွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့သော ဆောင်းပါးများ ပြန်လည်၍ စာအုပ်
အဖြစ်ထုတ်ဝေ​သော လက်ကမ်းစာအုပ်ငယ် ဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်အရွယ်အစား(၅၇၈)ကီလိုဗိုက်။ File size (578)KB pdf file application. Uploaded by Read More…
စေတိယပုစ္ဆာဝိဿဇ္ဇနာကျမ်း - မင်းကွန်းဓမ္မစေတီဆရာတော်ဦးနာဂိန္ဒါလင်္ကာရ
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ်မပါပေ။ ဤစာအုပ်တွင် စေတီနှင့်ပတ် သက်သော သိကောင်းဖွယ်ရာအဖြာဖြာကို ရေးသားပြုစု ထားပါသည်။ စေတီ​ကိုးကွယ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာ သော အကျိုးကျေးဇူးနှင့်စေတီကို ပြစ်မှားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးတို့ကို ကျမ်းကိုးကျမ်းကားနှင့် ညွှန်ပြထားပေသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်တိုင်း ဖတ်မှတ်သင့်
သော စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပေသည်။ စာအုပ်အရွယ်
အစား(၁.၁၀)မီဂါဗိုက်။ File size (1.10)MB pdf file
application. Uploaded by 25.9.2012.
SIDDHARTHA (An Indian Tale) - Hermann Hesse
About the buddha before attain enlightenment and name of being as prince at nepal. File size (294)KB pdf file application. Uploaded by